Another case of ‘loss in translation’ 🙂
Posted by watote | 02/08/2010, 10:49
Irrawaddy ကအင်တာဗျူးကို ဖတ်ချင်ရင် ဒီမှာလင့်..
Posted by watote | 02/08/2010, 12:27
“မှားမှန်း မှန်မှန်း ဘယ်သိမလဲ၊ ကျနော်လည်း ကူးရေးရတာလေ” ဆိုတာကတော့ Resource တွေ Refernece တွေ limtied ဖြစ်လို့ Validate မလုပ်နိုင်ဘူး လို့ နားလည်မိတယ်။ (စာရေးဆရာ ဖြစ်နေပေမယ့်) ကိုယ်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းလောက်အောင် သူအပြောအဆို မှားတယ်လို့ပဲ သဘောထားပေးပါတယ်။ ဒိထက်တော့ မပိုပါဘူး။ မြန်မာပြည် လူဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲကို CIA Web Site လိုမျိုးကိုပဲ Reference လုပ်ကြပြီး အမှန်အကန် အချက်အလက်ကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Validate လုပ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခက်ခဲတယ်လေ။ CNN က သတင်းထောက် NY Times က ဂျာနယ်လစ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆရာထက် နည်းနည်းပိုသာမှာပေါ့။ ဒါလေးတော့ နားလည်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျန်တာတွေကတော့ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ အပေးအယူ တစ်ခုခုများ ရှိသလားမသိ။ ဇာတ်လမ်းက မအူမလည်နဲ့။
Posted by Andy Myint | 02/08/2010, 14:45
You are very generous, Ko Andy.. 🙂
Posted by zizawa | 02/08/2010, 15:06
Bravo ! ( copy from KAD) 🙂
Posted by K | 03/08/2010, 02:24
Long time no hear amagyi.
Posted by zizawa | 03/08/2010, 03:16